होसियार, तपाईको घाँटीको सुनको सिक्री लुटिएला ? , झापाको दमकका बिजु पक्राउ - Baikalpikkhabar
होसियार, तपाईको घाँटीको सुनको सिक्री लुटिएला ? , झापाको दमकका बिजु पक्राउ
चैत २७, काठमाडौं । सुनसरीको ईटहरीमा सुनको सिक्री र लेडिज ब्याग लुटेर आतंक मच्चाउने बिजु मोतेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
झापाको दमक घर भएका ३० वर्षीय बिजुलाई ईटरही उप–महानगरपालिका–६ बाट पक्राउ गरिएको ईटहरीका डिएसपी अर्जुन केसीले रातोपाटीलाई बताए । मोरङको केराबारी गाउँपालिका–९ मा डेरा गरेर बस्ने बिजुले ईटहरीमा लुट आतंक मच्चाउँदै आएका थिए ।
‘साँझपख पसल बन्द गरेर हिँडेका महिलालाई उनले टार्गेट गर्ने गरेका थिए’ डिएसपी केसी भन्छन्–‘सुन र पैसा लुटेको ७ वटा घटनाका पिडीतहरु हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् ।’ ०७७ पुसपछि उनले ईटहरीमा ७ ठाउँमा लुटपाट गरेका हुन् ।
मोटरसाईकलमा एक्लै हिँड्ने बिजुलाई लामो सर्भिलेन्स पछि ईलाका प्रहरी कार्यालय ईटहरीले पक्राउ गरेको हो । उनीविरुद्ध प्रहरीले चोरी मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
गत पुस २५ मा ईटहरी–९ बिपी चोकमा एकजना महिलाको लेडिज ब्याग तानेर उनले ३ लाख नगद लुटेका थिए । झोलामा टार्गेट गर्ने बिजु झोला नबोक्ने महिला बाटोमा भेटिए सिक्री लुटेर मोटरसाईकलमा हुँईकिन्थे ।
शुक्रबार, २७ चैत, २०७७, बिहानको ०९:१९ बजे